Fitsangatsangana amin'ny ala Småland - fitsidihana an'i Hultsfred
amin'ny lalana malefaka misy fomba fijery mahafinaritra
Apetraho ny baotinao, amboary kitapo fisakafoanana ary akanjo ba matevina fanampiny ary mivoaha amin'ny iray amin'ireo làlamby fitsangantsanganana mahafinaritra ataonay. Eto ianao dia afaka mandeha amin'ny lalana malefaka miaraka amin'ny fomba fijery mahafinaritra amin'ny ala, vohitra ary ny tontolon'ny fambolena.
Björnnässlingan dia ala majika tena misy kesika taloha izay mijoro manodidina ny vatolampy izay rakotra lichens. Ny tahirin-javaboary Björnnäset dia hita eo
Ao Järnforsen, misy tambajotranà làlana fitsangantsanganana mahafinaritra, manomboka eo ivelan'ny fiarahamonina avokoa. Amin'ny voalohany dia misy
Amin'ny Hjortenleden ianao dia mandeha amin'ny arabe gravel tsara mamakivaky ny tontolon'ny fambolena sy ny tanàna, mifangaro amin'ny lalana kely mamakivaky ny ala.
Ao Järnforsen, misy tambajotranà làlana fitsangantsanganana mahafinaritra, manomboka eo ivelan'ny fiarahamonina avokoa. Amin'ny voalohany dia misy faritra barbecue,
Manodidina an'i Hammarsjön dia manodidina an'i Stora Hammarsjön ary tena tsara amin'ny dia iray andro. Mandeha amin'ny lalana tery ianao amin'ny ankapobeny
Mahita Virserum irery
Mahita Virserum irery. Raha manana fotoana sisa tavela ianao mandritra ny fitsidihanao an'i Virserum, dia mamporisika anao izahay hanao izany
Azonao atao ny manomboka ny dianao amin'ny alàlan'ny valan-javaboary Länsmansgårdsängen. Ny lalana dia mitondra anao mamakivaky ny vondrom-piarahamonina indostrialy taloha Hjortöström ary mitondra anao bebe kokoa
Manomboka amin'ny zaridaina Kalvkätte ny làlana, izay toerana tena tsara amin'ny fivoahana ny làlambe 23 mankany amin'ny foibe Hultfred. Ampidiro ny fiara
Ity lalana ity dia mamakivaky ny tapany ambony amin'ny tanànan'i Hultsfred ary mampifandray ny Ostkustleden sy Sevedeleden. I Lönnebergaleden dia ao amin'ny tambajotran'ny làlambe any amin'ny lemaky ny Sweden ary
Volana iray izay mihodina manaraka ny farihy. Misy latabatra kafe roa misy tafo akaikin'ny tranokely MOK, faritra fandroana ary efitrano fanovana ary faritra barbecue an'ny taloha.
Emilleden dia manomboka tsara indrindra avy any Lönneberga hembygdsgård na Mariannelunds sy Hessleby hemgårdsgård, izay misy toerana malalaka fiantsenana. Misafidy indray ianao